Konak Nestor Bungalows - I-Airbnb
Skopje, UMntla Makedoni
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguSuzana
I-Конак Nestor inikezela ngendawo yokuhlala yanamhlanje kunye ne-air-conditioned kumagumbi angama-25 m2 anezindlu zangasese zanamhlanje , i-cable TV, i-TV ye-LED, i-intanethi yamahhala kunye nendawo yokupaka.
Iindwendwe zethu zinokutyebisa ukuhlala kwazo ngokutya kwindawo yokutyela i-Oreov Lad, enika izitya zaseMacedonia kunye nezamazwe ngamazwe. Kuzo zonke iindwendwe ezinebhedi kunye nesidlo sakusasa, isidlo sakusasa siya kunikwa kwindawo yokutyela.
4.0 · Izimvo eziyi-4
I-Konak Nestor ibekwe kwindawo esentshona yesixeko saseSkopje, kufuphi neziko lezemidlalo kunye nokuzonwabisa iSaraj .I-Konak Nestor itholakala kuphela kwiikhilomitha ezili-10 ukusuka kumbindi we-Skopje, i-5 km ukusuka kwi-canyon Matka kunye ne-28 km ukusuka kwisikhululo sezindiza uAlexander The Great. -Skoje
Umbuki zindwendwe ngu- Suzana
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Skopje